Ho fitiavana ny teny: boky tantara foronina voalohany natonta amin’ny teny Mro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2019 13:36 GMT
Vakio amin'ny teny English, 简体中文, русский, Français, Italiano, Ελληνικά, Nederlands, Esperanto , Español, नेपाली, polski, বাংলা
Andro Iraisampirenena ho an'ny Tenin-drazana ny 21 Febroary lasa teo ary ho fankalazana izany, namoaka sy nizara tantara foronona voalohany amin'ny endrin-tsotra teny Mro ho an'ireo foko monina any amin'ny faritra sisintany iraisan'i Myanmar, Bangladesh ary India ny fikambanana iray mpanao asa soa.
Monina ao amin'ny distrikan'i Bandaban any amin'ireo havoana any atsimo atsinanan'i Bangladesh ny vondrona indizeny Mro. Araka ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 1991, miisa 22.178 monja ny isan'ny mponina. Zana-bondron'ireo vahoaka Chin izy ireo, avy amin'ny vondrona Tibeto-Birmana ao amin'ny fianakaviana Sino-Tibetana ny fiteniny.
Milaza tantara mifandraika amin'ny finoana, fanoharana, kolontsaina sy fomba fanaon'ny vondrona ilay tantara foronina, mitondra ny lohateny hoe “Angano Mro”. Navoaka tamin'ny fiteny Bengali koa ilay boky mba hahafahan'ny vondrona hafa mamaky ireo angano ireo. Nosoratan'i Yangan Mro, ity no famoronana voalohany navoaka tamin'ny alàlan'ny endri-tsoratra Mro ary nozaraina maimaim-poana.
Mila tehirizina ny fiteny rehetra eran'izao tontolo izao, hoy i Niaz Morshed tao amin'ny Facebook
Ny boky voalohany amin'ny fiteny Mro !!! Ity no fankalazantsika ny Ekushe February (Andro iraisam-pirenena ho an'ny tenin-drazana)
Ny Bidyanana Foundation dia fikambanana iray manolo-tena manohana ireo sehatra samihafa miady amin'ny fahantrana sy tsy fananana fialofana, indrindra fa ireo zaza kamboty. Manamboninahitra 40 sy mpirotsaka an-tsitrapo an-jatony, miaraka amin'ireo sampana eo an-toerana miisa 8 no mitantana azy. Bidyananda Publications no fikambanana rahavaviny.
Niresaka tamin'ny mpanorina ny fikambanana Kishor Kumar Das ny Global Voices:
Bangladesh dia firenena be mpiteny Bangla, vondrona izay mandrafitra ny 98% ny mponina (163 tapitrisa any Bangladesh, 261 tapitrisa eran-tany). Na izany aza, misy fiteny vitsy an'isa 39 ampiasaina any Bangladesh ary eo an-dalam-pahaverezana ny sasany amin'izy ireo. Namoaka fikarohana ilay mpikaroka Salek Khokon fa efa maty ny fiteny roa vitsy an'isa (Kudukh sy Nagori).
Iray amin'ireo fanamby ny fisian'ny olona any amin'ny havoana miteny amin'ny fiteniny saingy manoratra amin'ny teny Bangla (teny am-bava fotsiny ny sasany amin'izy ireo). Na dia izany aza, misy ireo tanora indizeny mpikatroka mampiasa zava-baovao mba hampiditra ny tontolo nomerika amin'ny tenimny sy ny endri-tsorany.
Nahazo ny ivon-toerana iraisam-pirenena ho an'ny tenin-drazana (IMLI) ankehitriny i Bangladesh, sampana voafehin'ny sata izay miasa ho fiarovana ny fiteny. Satria mijery akaiky ireo olana ireo ny governemanta ary manosika ho amin'ny famoahana amin'ny fiteny samihafa ireo fikambanana toy ny Bidyananda, misy ny fanantenana fa hisy ny fepetra horaisina hiarovana ireo fiteny ireo.